नेपाल–भारत सीमामा लुकीछिपी आवतजावत, कोरोना संक्रमण फैलिने ‘मुख्य चुनौती’
विभिन्न प्रदेशमा कोरोना भाइरस संक्रमणका बिरामी भेटिएपनि ५ नम्बर प्रदेशमा कोरोना भेटिएको छैन । लकडाउनको ३ हप्ता अर्थात् २१ दिन पुग्दा प्रदेशमा तेस्रो देशबाट आएका व्यक्तिबाट कोरोना भेटिएको छैन ।
तेस्रो मुलुकबाट आएका व्यक्तिबाट संक्रमण फैलिने समय करीब सकिएकाले अब प्रदेशको मुख्य जोखिम भारतसँगको खुला सीमा नै देखिन्छ । ५ नम्बर प्रदेशका ६ जिल्लाको ३५० किलोमिटर क्षेत्र भारतसँग जोडिएका छ । नेपालसँग जोडिएका भारतका जिल्लामा कोरोना भाइरस तीब्र रुपमा फैलिएको छ ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख उमाशंकरप्रसाद चौधरीले अबको प्रमुख जोखिम नै भारत रहेको बताए । ‘भारतबाट केही व्यक्तिहरू अझै पनि लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन्, तिनीहरूलाई रोक्नुमा नै अब हाम्रो ध्यान जान आवश्यक छ,’ चौधरीले लोकान्तरसँग भने, ‘भारतमा दोस्रो चरणबाट तेस्रो चरणमा कोरोना प्रवेश गर्दैछ । जुन नेपालका लागि पनि खतराको घण्टी बज्नु हो । अबको बल सीमामा कडाइ गर्नु नै हो । हामीलाई प्रत्यक्ष असर भारतले पार्छ ।’
सीमानाका बन्द गरिएपनि मालबाहक गाडी भारतबाट आइरहेका छन् । सीमाबन्द गरिएको छैन । कुनै न कुनै रुपमा भारतबाट मानिसहरू आइरहेका छन् ।
प्रदेशमा क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूलाई र्‍यापिड (आरडीटी) मार्फत् चेकजाँच पनि चलिरहेको छ । क्वारेन्टाइनमा २ हजार ५०५ जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् । हालसम्म ७०६ जनाको जाँच गरिसकिएको छ । जाँच भएका कसैमा पनि कोरोना ‘पोजेटिभ’ देखिएको छैन ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुख प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) नरबहादुर केसी भारतसँग जोडिएका नाकादेखि अन्य ठाउँमा कडाइ गरिएको बताए । ‘प्रदेशको भारतसँग ३५० किलोमिटर क्षेत्र जोडिएको छ । त्यसमा २७ वटा ठूला नाकाहरू छन् । तीबाहेक अन्य बस्ती जोडिएका गाउँठाउँमा पनि हाम्रो गस्तीदेखि कडाइ गरिएको छ,’ केसीले भने, ‘सीमामा मात्रै हाम्रो नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गरी ७ हजारलाई परिचालन गरिएको छ । कतैबाट लुकेर नेपाल प्रवेश गर्नुहरूबाट नै हामीलाई चुनौती छ । नाकाबाहेक अन्य सम्भावित ठाउँमा पनि पोस्ट राखेर प्रहरी परिचालन गरेका छौं ।’
भारतबाट लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका व्यक्तिलाई नेपालबाट भारत जानेलाई नेपालको क्वारेन्टाइन र भारतबाट नेपाल आउनेलाई भारतकै क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । हालसम्म नेपालमा १२ जनामा कोरोना संक्रमण भेटिएको छ ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. राजेन्द्र खनालले कोरोना भाइरसका नयाँ–नयाँ लक्षण देखिएकाले अब क्वारेन्टाइनमा बस्ने समय २ हप्ता नभएर ४ हप्ता बनाउनुपर्ने बताए । ‘हामी अब ५ नम्बर प्रदेशमा हवाईजहाजबाट आउनेहरूको संक्रमणबाट जोगिएका छौं । अब हामी भारतबाट लुकीछिपी पैदल हिँडेर नेपाल प्रवेश गर्नेहरूबाट जोगिनुपर्‍यो/उनीहरूको प्रवेशलाई रोक्नुर्‍यो । नत्र हामीलाई भारतमा फैलिने क्रम बढ्दा हामीलाई जोखिम घटेको मान्न सकिँदैन,’ डा. खनालले लोकान्तरसँग भने, ‘कोरोना फैलिन सरकारले मात्र रोक्न सक्दैन । सरकार र सरोकारवाला सचेत हुनुपर्छ ।’ रुपन्देहीको मर्चवार नजिकै भारतको कोल्हुई बजारमा कोरोनाका ६ जना बिरामी भेटिएका छन् ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रुपन्देहीका निमित्त प्रमुख डा. राजेन्द्रकुमार गिरीले हालसम्म ८० जनाको स्वाब जाँच गरिएको बताए । त्यसमा कसैको पनि रिपोर्ट पोजेटिभ नदेखिएको उनले जानकारी दिए । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई बुटवलमा रहेको नेसनल प्याथ ल्याबले पनि आफ्नो मेसिन उपलब्ध गराएको छ ।
दशैंमा यसरी बनाउनुहोस् मांशाहारी र शाकाहारी स्वाद...
चुनाव सकिएपछि सुकुम्बासीलाई बिर्सिन्छन् नेता, हिउँद...